Photoshop ကို Sketch နဲ့ ယှဥ်ကြည့်တဲ့အခါ | Tree Myanmar
Home / Website / Photoshop ကို Sketch နဲ့ ယှဥ်ကြည့်တဲ့အခါ
Photoshop ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ Graphic Designers တွေအတွက် အဓိကအသုံးပြုနေရတဲ့ software တစ်ခုဆိုတာ ပြောစရာတောင်မလိုပါဘူး။ Software မှာပါ၀င်တဲ့ Feature တွေအနေနဲ့တေ့ာ Sketch ထက် Photoshop က ပိုများတာအမှန်ပါပဲ။ ဒါဆိုဘာလို့ Sketch နဲ့ နှိုင်းယှဥ်ဖို့လိုတာလဲ။ နှစ်မျိုးစလုံးမှာ သူ့အားသာချက်၊ အားနည်းချက်လေးတွေ ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ အောက်ပါအခြေခံအချက်လေးတွေကို တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်။
Photoshop ကို လွန်ခဲ့သည့် 31 နှစ် (1988) ခုနှစ်မှာ Thomas နဲ့ John Knoll တို့က တီထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Sketch ကိုတော့ လွန်ခဲ့သည့်9နှစ် (2010) ခုနှစ်မှာ Software Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bohemian Coding Company က ဖန်တီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ် 30 ကျော် Senior ကြီးကို ကျော်နိုင်မယ့် software ပေါ်မလာသေးတာကိုက အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ P – 1, S – 0
ကိုယ်တွေအပါအ၀င် ဒီက Designer တော်တော်များများကတော့ software တွေကို ၀ယ်သုံးဖို့ထက် Crack version ကိုသာ လွယ်လွယ်ကူကူ သုံးနေကြတာဟာ အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Full Version ၀ယ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Photoshop က တစ်နှစ်စာကို $300 နီးပါပေးရပြီး Sketch ကတော့ Personal use အတွက် $99 ပေးရပါတယ်။ နှစ်မျိုးစလုံးကတော့ Trial period တစ်လ ပေးထားပါတယ်။ P – 0, S – 1
Photoshop က ဘယ် OS မှာမဆို သုံးလို့ရပြီး Sketch က တော့ သီးသန့်ဆန်ပါတယ်။ Mac OS အတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး Window မှာရော Linux မှာပါ သုံးလို့မရပါဘူး။ P -1, S – 0
Featured ပိုများတဲ့ Photoshop က 1 GB လောက်ရှိပြီး Sketch 41 MB သာရှိပါတယ်။ P – 0, S -1
သိသာပါတယ် File size ပိုများတဲ့ကောင်က Speed လည်း‌နှေးမှာပါပဲ။ P – 0, S -1
Photoshop အတွက် Plugin တွေ ၊ Action တွေ free download ရော premium ပါအများကြီးထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်။ Brushes tool များစွာလည်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Sketch မှာတော့ Plugin တစ်မျိုးသာ ထည့်လို့ရပါတယ်။ Brushes တွေသုံးဖို့၊ ပုံတွေပြင်ဖို့ အတွက် Sketch က မထောက်ပံ့နိုင်ပါဘူး။ P-1, S – 0
7. Color Management
Color Mode တွေဖြစ်တဲ့ Bitmap, Grayscale, Duotone, Indexed, RGB, CMYK, Lab, Multichannel တွေအစုံအလင်ပါရှိတာကတော့ Photoshop ပါ။ Sketch မှာ RGB တစ်မျိုးထဲရပါတယ်။ P – 1, S – 0
Photoshop ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သုံးဖို့၊ tool တွေနားလည်ဖို့၊ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိအချိန်ပေးရပါမယ်။ Sketch က တော့ tool လည်း သိပ်မများတဲ့အတွက် အချိန်တိုအတွင်း တတ်‌မြောက်နိုင်ပါတယ်။ Photoshop တတ်ထားပြီးသူက Sketch ကိုလေ့လာရင် ပိုတတ်မြန်ပါတယ်။ ဒါကိုတော့ ဘယ်ဟာ အားသာလဲ မပြောတတ်ဘူး။
9. Keyboard Shortcut
Keyboard ပေါ်က ရှိသမျှ key တိုင်းဟာ Photoshop အတွက် Shortcut ရှိပါတယ်။ Sketch မှာတော့ နည်းနည်းပဲရှိပါတယ်။ P – 1, S – 0
Photoshop က Graphic Designer ရော Web Designer အတွက်ပါ အသုံး၀င်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် web app တွေ User Interface design တွေကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ ပိုလက်၀င်ပါတယ်။ ဒီအတွက် အားနည်းချက်ပဲဆိုပါတော့။ Sketch ကတော့ ပြောင်းပြန်ပါ။ web app တွေ icons တွေဆွဲဖို့ အရမ်းကို လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်။ ပြောရရင် Web Designer တွေပဲ သုံးသင့်တဲ့ software ပါ။ P- 0, S – 1
Photoshop နဲ့ဆွဲထားတဲ့ design ကို Html, Css code ပြန်ရေးဖို့ဆို inspect ထောက်လို့မရပါဘူး။ Sketch မှာတော့ font-family, font-size, color code၊ padding, margin, border, shadow, size တွေအတွက် inspect ထောက်ပြီး ရေးရုံပါပဲ။ Sketch နဲ့ Design ဆွဲတဲ့အခါ grid, column တွေ built in ပါပြီးသားမို့ layout ခွဲဖို့ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ P – 0, S -1
Photoshop Design တစ်ခုကို layer ပေါင်းများစွာ Group folder ပေါင်းများစွာ နဲ့ ဖန်တီးရတာဖြစ်ပါတယ်။ Group သာမဖွဲ့ထားရင် သက်ဆိုင်ရာ layer ကို ရှာဖို့ အချိန်ပိုကုန်ပါတယ်။ Sketch ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ File တွေကို Side by Side ကြည့်မလား၊ Compare လုပ်မလား၊ ပြင်မလား။ Document တစ်ခုထဲမှာ file တွေကို စုထားနိုင်တာကြောင့် ပိုအသုံးပြုရလွယ်ပါတယ်။ P- 0, S – 1
အပေါ်က အခြေခံအချက်လေးတွေ သိပြီးပြီဆိုတော့ မိမိလိုအပ်ချက်နဲ့ ဘယ် Software က ကိုက်ညီသလဲ
အကယ်၍ သင်က UI တွေ App Design တွေဆွဲဖို့ ဆိုရင်တေ့ာ Sketch ကို သုံးသင့်ပါတယ်။ သင်က Graphic Design အတွက် သုံးမယ်ဆိုရင်တေ့ာ Photoshop က ပိုသင့်တော်ပါတယ်။
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး လှပသေသပ်တဲ့ Graphic Design, Professional website တွေ လုပ်ဖို့ စိတ်၀င်စားရင်တော့ Tree Myanmar မှ အသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေး‌နေပါတယ်။
Tree Myanmar / November 10, 2019